Kulan looga xaajooneyo dadka Daacish ka soo laabta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Haweenay iyo ilmo ku sugan xeryaha Suuriya. sawir: Fadel Senna/TT.
Kulan looga xaajooneyo dadka Daacish ka soo laabta
La daabacay onsdag 24 april 2019 kl 11.27
Xarunta dhexe ee ka hor tagga falalka xag jirnimada ayaa maanta kulan la yeelan doona howl wadeenno ka socda maamullada afartameeyo degmo oo horey uu ciidanka ammaanku ugu war geliyay iney soo gaari karaan dadyoow ka soo noqday Daacish.
– Waxaa naloogu yeerey gabar dhowr iyo toban jir ah oo sannado ka hor u socdaashay Daacish. Haddii uu shakhsigaasi u baahnaan lahaa xiriir uu la sameeyo laanta adeegga bulshada ama maamullada xannaannada dhallaanka, waxaan aaminsanahay in ciidanka nabad sugiddu nagu soo war gelin lahaa habkii aannu u maareeyn laheyn, sida uu sheegay Radovan Javurek, ahna guddoomiyaha guddiga shaqada iyo hab nolol wanaagga bulshada ee degmada Kristianstad, isla markaana ka tirsan xisbiga Liberalerna.
Maamulka degmada ayaan iminka ka war hayn halka gabadhaasi ay ku sugan tahay, hase yeeshee ay degmada ka soo gaartay ciidanka nabad sugidda qoraal looga welwelsan yahay, iyadoona degmooyinkaasi ey ka qayb qaadan doonaan kulanka lagu qabanayo xarunta dhexe ee ka hortagga falalka xag jirnimada sidii aqoon korosi looga heli lahaa.
Goolka laga leeyahay kulanka ayaa salka ku haya sidii degmooyinka looga talo siin lahaa arrinka la xiriira dadyoowga ka soo laabanaya Daacish iyo sidii ey waayo aragnimadooda isku dhaafsan lahaayeen.
Yassin Ekdahl oo bartay culuunta caafimaadka maskaxda, horayna ula soo shaqeeyn jiray wakiilkii hore ee xarunta ka hor tagga falalka xag jirnimada ayaa sheegay in degmooyinku u baahan yihiin taageero ballaaran in laga siiyo arrinkaa,–
-Qooyska ka soo laabtay Daacish looma diri karo oo keliya inuu guriga ku soo booqdo gacan yare ka howl gala laanta adeegga bulshada. Waa in aannu wax ka ogaanaa qoyskan: inuu dhibaatada qayb ka yahay iyo in kale? Yaa gaari doona go’aanka qiimeeyntaa? Aqoontaa yaa iska leh? Habkuu maamulka degmadu aqoontaa ku yeelan karaa?
Kulanka maanta ayey howl wadeennada degmooyinka lagu war gelin doonaan habka ey ugu diyaar garoobi karaan, habka uu xeerka dalku u shaqeeyo. Anders Kretz waa talo bixiye ka howlgala xarunta dhexe ee ee falalka ka hor tagga fikirrada xag jirka.
– Degmooyinka qaarkood waxaa iminkaba ku sugan dad dib uga soo laabtay Daacish, maadaama ey dalka dib ugu soo laabteen dad gaaraya 150 qof. Kolka laga hadleyo kuwa ku sugan xeryaha Suuriya maanta, lama garan karo halka ey dooran doonaan iney dalka ka degaan iyo iney dib ugu soo laaban doonaan Sweden sideedaba, sida uu sheegay Anders Kretz oo u warramay idaacadda Sweden.